Mayelana NATHI | I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.
Unyaka ka-2011 ubone imakethe engasile yezinto zasemhlabeni ezingandile, ikakhulukazi i-PrNd ne-DyFe, okuyizinto ezisetshenziswayo eziyinhloko zikazibuthe womhlaba ongajwayelekile we-Neodymium. Ubuhlanya buphinde bwephula ukuthengwa okuzinzile okuhlala isikhathi eside futhi baphoqa amakhasimende amaningi ahlobene nozibuthe ukuthi afune abahlinzeki bezibuthe beNeodymium abaphephile. Iqhutshwa izidingo zamakhasimende, kulo nyaka i-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. yasungulwa yithimba lobuchwepheshe elinobungcweti nobubanzi besipiliyoni emkhakheni kazibuthe.
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende ezeqile, sinemishini yocwaningo, yezokukhiqiza neyokuhlola esezingeni eliphezulu, esisiza ukuthi sijabulele ukukhula okuzinzile kepha okwandayo. Ngoba siyinkampani esezingeni eliphakathi nendawo ekhiqiza amathani angama-500 kazibuthe we-Neodymium, singasabela ngokushesha kuzidingo zamakhasimende ezibanzi mayelana nozibuthe kanye nemihlangano ehlukahlukene kazibuthe, efana nozibuthe we-Neodymium, uzibuthe ovalelayo, i-chamfer kazibuthe bese ufaka uzibuthe, uzibuthe wokudoba, uzibuthe wesiteshi , uzibuthe wokugoqa, uzibuthe owenziwe ngenjoloba, uzibuthe webhodwe, uzibuthe wasehhovisi, uzibuthe wemoto, njll. Ngaphezu kwama-85% odonsa bethu kanye nemihlangano kazibuthe ithunyelwa eJalimane, eFrance, e-UK, e-US naseJapane, okuyizinto eziqinile ekufuneni ikhwalithi.
Ngenxa yobukhulu bethu obumaphakathi, siziqonda kahle izimo, izidingo nobunzima bezinkampani eziphakathi nendawo. Ngakho-ke sizinikezele ekubambisaneni nokusiza amakhasimende aphakathi nendawo ukuqhubeka.
Ngaphezu kwalokho, izinhlobo nezinhlobo eziningi zemihlangano ejwayelekile kazibuthe iyatholakala esitokweni ukuhlangabezana nemfuneko yamakhasimende yokulethwa ngesikhathi esifanele.
Ungasitshela ngephrojekthi yakho futhi singakusiza kusuka kumbono kuya ekukhiqizweni kwe-serial. Akunandaba ukuthi njengamanje uyaklama, uyathuthuka noma uyakhiqiza yini, uzoqiniseka ukuthi iHorizon Magnetics enekhono lokuklama nethimba lokukhiqiza linganikela ngesikhathi esibalulekile futhi libize izinyathelo ezisebenzayo.
I-Horizon Magnetics bekulokhu kuyinkampani eqhutshwa ngenani. Amagugu ethu akhombisa indlela esiphatha ngayo ibhizinisi lethu ekusebenzelaneni nabalingani bethu bebhizinisi, abasebenzi kanye nomphakathi.
Isibopho:Sibambe isibopho sethu maqondana nekusasa lethu nomphakathi ngokwakha nokukhiqiza odonsa kahle kakhulu kanye nezixazululo zikazibuthe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu emakethe eguqukayo njalo. Sizibophezele ekukhuthazeni isibopho esizimele nomoya wokubambisana, futhi sibambe iqhaza ngokuzithandela ekubuyekezeni, ekuqapheni nasekuthuthukiseni njalo ukusebenza kwethu, ukusebenza kahle nokusebenza kahle. Siyabona ukuthi umthwalo wethu emphakathini uvikelekile ngempumelelo yethu yebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, kumele futhi sikhuthaze ababambisene nabo ebhizinisini ukuthi balandele indlela efanayo yokuziphatha.
Ukuqamba:Ukuqamba kuyitshe legumbi lempumelelo ye-Horizon Magnetics. Sifuna ugqozi nsuku zonke emoyeni wethu wokusungula futhi sihlose ukuqamba izinto ezintsha ngokwenza izixazululo ezingakabi khona futhi ezilandela izindlela ezintsha ukuze umbono wanamuhla ube yiqiniso lakusasa. Sakha isiko lolwazi, ucwaningo kanye nokuqeqeshwa okuqhubekayo okuvula ama-horizons amasha kubalingani bethu bebhizinisi nakithi uqobo.
Ubulungiswa:Sibheka ukungakhethi bobabili njengesimo sempumelelo yenkampani yethu lapho sisebenzelana nabalingani bethu bebhizinisi. Akunandaba noma ngabe ungabahlinzeki bethu noma amakhasimende, kufanele sikuhloniphe futhi sihlonishwe nguwe! Okwamanje kufanele silandele ukuncintisana okulungile nokukhululekile nalabo esincintisana nabo.